Kalika online | रुकुमको ‘कमल दह’ सम्भावना धेरै,चासो थोरै
रुकुम । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ५ रुकुमकोटमा कमल दह छ । यो दह १६ सय मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूणर् दह ऐतिहासिक पनि छ ।
रुकुमकोट पुग्नेवित्तिकै जो कोही पनि यो दहमा अवलोकनका लागि पुग्छन् । अहिले वर्षाको सयमा कमल फुलेर दह झन आर्षक देखिएको छ ।
जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरू पनि बढिरहेका छन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमै रहेको कमलदहमा पुग्न अहिले सजिलो पनि भएको छ । अहिले तीनै तहका सरकारले कमलदह परिसरमा भौतिक संरचना पनि निर्माण गरेका छन् । दहको वरिपरि धार्मिक मठमन्दिरहरू पनि रहेका छन् ।
यस दहको मुख्य विशेषता भनेकै कमल हो । कमल समय आएपछि आफै फूल्छ । कमलदहको गहिराइ कति हो ? यहाँ कुन-कुन प्रजातिका जीव पाइन्छन् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ आधिकारिक रुपमा भेटिँदैन ।
अव सिस्ने गाउँपालिकाले यो दहको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । गाउँपालिका कमलदहको विस्तृत अध्ययन गर्ने र त्यसबारेको जानकारी राख्ने तयारीमा जुटेको छ ।
गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि दाहालले कमल, भूगोल, पानी, जीव र वनस्पतिबारे जानेका विज्ञलाई बोलाएर यस बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा कमलदहको विस्तृत अध्ययनको काम गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘कमलदह संरक्षण र अरु विकासका लागि पनि यो आवश्यक हुने भयो ।’ दाहालले भन्नुभयो, ‘त्यही आवश्यक्ता महशुस गरेर अब गाउँपालिकाले यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यक्रम बनाएको हो ।’
गाउँपालिकाले यसबारे अध्ययनका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो तर त्यो सम्भव नएपछि अब यस सम्बन्धिका विज्ञलाई नै ल्याएर अध्ययन गर्ने र विकास र संरक्षणमा लाग्ने योजना बनेको गाउँपालिकाले बताएको छ ।
जिल्लाको एक महत्वपूणर् पर्यटकीय गन्तव्य कमलदह सिस्ने गाउँपालिकामा रहेकाले पनि यसको अध्ययनमा गाउँपालिकाले चासो दिएको हो ।